मेरो गन्थन: रमाइलो गणित
गणित एउटा रमाइलो विषय हो । हामी दैनिक यसको विभिन्न नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । हालै मात्र चलनचल्तिमा आएको यसको उदाहरण हेरौं न ।
यदि कसैले तपाईंको उमेर कति हो भनेर सोधिहाल्यो भने साँचो उमेर भन्न पक्कै हिचकिचाउनु हुनेछ, तरभनिहाले पनि सत्य बताउनु होला भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी ढाँट्न पुग्छौं, जुन आफ्नो हिसाबले ठिकै हो । तरमानिसहरु विभिन्न उपाय खोज्छन उमेर पत्ता लगाउनलाई । यो त्यसै मध्यको एउटा कडी हो । गणितीय विधिअनुसार पछ्याऊँदै गयौं भने रमाइलो लाग्नेछ । यो अत्यन्तै सरल छ, जसको निम्ति शायद तपाईंले एक मिनेटभन्दा कम समय खर्च गरे पुग्छ । तर पहिले नै पुछारमा हेर्नु भयो भने चैं खल्लो लाग्न सक्छ । त्यसैले म सावधानगराउन चाहन्छु , कृपया यसलाई क्रमश: पढ्दै अनि हिसाब गर्दै जाऊँ ।
1. सर्वप्रथम तपाईं एउटा अंक रोज्नुस (जुन अंक 1 देखि 10 सम्मको हुनुपर्नेछ)
2. त्यसलाई2ले गुणा गर्नुस्
3. अब त्यसमा5पनि जोडौं
4. योगफललाई 50 ले फेरि गुणन गर्नुस्
तपाईंले हिसाब गरिन्जेल म कुरौंला, हुँदैन ?
5. यदि तपाईंले यो वर्ष आफ्नो जन्मदिन मनाइसकेको भए 1759 जोड्नुस्, यदि छैन भने 1758
6. ल अब आफ्नो चारै अंकको जन्म साल घटाउनुस् (इस्वि सनको मात्र है)
अब तपाईं सँग3अथवा4अंक बाँकी रह्यो होला, होइन त?
यदि3भए पहिलो अंक,4भए पहिलो दुई अंक तपाईंले रोजेको अंक हो । पछिल्लो दुई चै तपाईंको उमेर ।
कस्तो लाग्यो, रमाइलो छैन त ???
मैले रोजेको अंक 10
2 ले गुणा गर्दा 20
5 जोडेपछिको अंक 25
त्यसलाई 50 ले गुणा गरेपछि 1250
मेरो जन्मदिन गई सकेकोले मैले 1759 जोडेपछी हुने अंक 3009
मेरो जन्मसाल 1980 घटाए पछि 1029
त्यसैले मैले रोजेको अंक 10 अनी मेरो उमेर 29 .
Posted by inashrestha at 12:00 PM